ချစ်ကြည်အေး: တနှစ်သား ဘလော့ဂ်
ကိုအောင် Sat Nov 06, 07:45:00 PM GMT+8
တစ်နှစ်ကနေ နှစ်ပေါင်းများစွာ တိုင်ပါစေ အမရေ ...
Ingjin Sat Nov 06, 07:55:00 PM GMT+8
အို...ယနေ့မှစ နှစ်တစ်ရာတိုင်ကွယ်....း)))
ဖိုးတုတ် Sat Nov 06, 08:12:00 PM GMT+8
ဘလော့တစ်နှစ်မြောက်မှ နှစ်ပေါင်းများစွာ အောင်မြင်ပါစေ ..
ကိုပေါ Sat Nov 06, 08:16:00 PM GMT+8
အဲဒါ လက်နက်ကြီးလို့ မခေါ်လောက်သေးဘူးဗျိုး။ အပျင်းပြေ လေးဂွနဲ့ လှမ်းပစ်သလောက်ပဲ ရှိသေးတယ်။
တနှစ်တိတိ ဘလော့ဂ်ရေးခဲ့တယ်ဆိုတော့ နည်းတဲ့ ဝဋ်ဒုက္ခတော့မဟုတ်ဘူး။း-)
ဒီဝဋ်ကြွေး....မကုန်ခမ်းသရွေ့လေ... လည်စင်းခံ ဆပ်မယ်မေ.... ဒီလူသားသစ္စာ...ကမ္ဘာတည်သရွေ့လေ..... (ကြားညှပ်စကားပြော။......။“ဒီလူသားသစ္စာဟာ ကမ္ဘာတည်သရွေ့ပါပဲ”)....သြော်.....
:P Sat Nov 06, 08:20:00 PM GMT+8
သဒ္ဓါလှိုင်း Sat Nov 06, 08:25:00 PM GMT+8
အမချစ်ရဲ့ ဘလော့တနှစ်ပြည့်မှ နောင်နှစ်တွေအထိ စိတ်ရှိတဲ့အတိုင်း မျှဝေခံစားရင်း ရေးသားနိုင်ပါစေ..။ အမချစ်ရဲ့ စာပေကောင်းလေးတွေ
ကလူသစ် Sat Nov 06, 08:31:00 PM GMT+8
အဖြူရောင်နတ်သမီး Sat Nov 06, 08:36:00 PM GMT+8
ဝက်ဝံလေး Sat Nov 06, 08:50:00 PM GMT+8
ဒီမှာ ဆိုတာ နှိပ်တယ် page not found တဲ့ ကဲ လုပ်အူး မချစ်ရေ များက ဖတ်ချင်ပါတယ်ဆိုကာမှ....
“ တနှစ်က နေ နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် ဒီလို ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဘလော့ဂ်ဂါတွေနဲ့တူတူ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ ” နော်
မကျေနပ်ပါဘူး ခရေတွန်နဲ့သွားတွေ့တယ် ဒါကြောင့် လုံးးးးးးးးးးးးလုံးးးးးးးးးးးးး ကို မကျေနပ်ဘူး ဒါဗြဲ တာ့တာ
Ree Noe Mann Sat Nov 06, 09:04:00 PM GMT+8
တစ်နှစ်ပြည့်မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ တိုင်းသို့
ATN Sat Nov 06, 09:05:00 PM GMT+8
တနှစ်ဆိုတာ ဘာမှလည်း မဟုတ်ပါဘူး... ညီမချစ်ရေ့...
ခု တနှစ် ပြီးရင်... နောက်တနှစ် လာဦးမှာပေါ့...
စောင့်သာ ကြိုနေလိုက်...း)
Nge Naing Sat Nov 06, 09:15:00 PM GMT+8
Happy Birthday ပါ။ အခုမှ တနှစ်ပြည့်တာလား။ ကြာပြီထင်နေတယ်။ တနှစ်ပြည့်မှ နှစ်ပေါင်းများစွာ ပျော်ရွှင်စွာ ဆက်လက်ရေးသားနိုင်ပါစေ။
ညိမ်းနိုင် Sat Nov 06, 09:16:00 PM GMT+8
မီးမလာမှ ရပ်တော့မယ်ဆိုတော့ မြန်မာပြည်ပြန်ရောက်ခဲ့သော် မရေးတော့ဘူး
kay Sat Nov 06, 10:20:00 PM GMT+8
တနှစ်သမီး လေး.. ချစ်စရာလေးပေါ့..း)
စင်ကာပူ မီး မပြတ်ဘူးလို့.. မပြောနိုင်ဘူးနော..
( အပေါ်က..ကိုပေါ သီချင်းကို နားထောင်ပြီး အဆစ် ပြုံးသွားမိပါကြောင်း )း)
ရွှေရတုမှတ်တမ်း Sat Nov 06, 10:37:00 PM GMT+8
ချိုမိုင်မိုင် ကောင်းကောင်း ကတတ်ပြီ....
Anonymous Sat Nov 06, 10:50:00 PM GMT+8
တနှစ်ပြည့်မှသည် နောင်..နှစ်ပေါင်းများစွာထိ ပျော်ပျော်ကြီးရေးနိုင်ပါစေ
Sonata Cantata Sat Nov 06, 11:02:00 PM GMT+8
ကျေးဇူးတင်တဲ့ထဲမှာ ချစ်ကြည်အေးရဲ့ Complementary သောင်းကျန်းသူကြီးကို ချန်ထားလို့ မဖြစ်း)
၀က်ဝံလေးရေ...မချစ်က schedule နဲ့ တင်သွားတာ...
မယ့်ကိုး Sat Nov 06, 11:05:00 PM GMT+8
ိအစ်ကိုပေါ ကွန်မန့်ဖတ်ပြီး ရယ်လိုက်ရတား)
မမရေ ဒီဝဋ်ဒုက္ခထဲမှာ အတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ဖြတ်သန်းကြတာပေါ့နော်။
တစ်နှစ်မှစ နှစ်ပေါင်းများစွာ ...း)
sosegado Sat Nov 06, 11:10:00 PM GMT+8
ပျော်ရွင်စရာနှစ်ပတ်လည်လေးဖြစ်ပါစေ၊ နောက်နှစ် ၃၂၀ ရေးနိုင်ပါစေ။
T T Sweet Sat Nov 06, 11:42:00 PM GMT+8
ကိုပေါရဲ့ ကြားညှပ်စကားပြောပါတဲ့ သီချင်းလေးနားထောင်ရင်း ဆုတောင်းပေးသွားတယ်။
ယနေ့မှစ နှစ်ပေါင်းများစွာ ဘလော့ဂ်ကင်းနိုင်ပါစေ...။
အုပ်ကြီး Sat Nov 06, 11:45:00 PM GMT+8
သုခုမလေဒီ Sun Nov 07, 12:04:00 AM GMT+8
တစ်နှစ်သားဘလော့လေးအတွက် happy birthday ပါ..
Anonymous Sun Nov 07, 12:28:00 AM GMT+8
စာရေးဆရာ ဘလော့ဂါများ သတိထားစရာ။
စာရေးဆရာဘ၀မှ ရဟန်းဝတ်သွားသော ဆရာတော်တပါးရဲ့  စာရေးဘ၀ဖြင့် လူတွေကို လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟဖြစ်စေခဲ့ပုံကို မေတ္တာ အရှင်ဇ၀နက စာမျက်နှာ ၂၁၅ မှာဒီလိုရေးထားပြထားတယ်။
(PDF page မှာ page ရိုက်ထည့်ရင် 228/389)
လူတွေကို ကုသိုလ်မဖြစ်တဲ့ စာရေးရင် အကုသိုလ်ဖြစ်စေသလို အကျိုးမရှိတဲ့ စာရေးရင် အကျိုးမဲ့စေနိုင်တယ်။
အင်္ဂါဟူး Sun Nov 07, 01:17:00 AM GMT+8
အံမယ် တစ်နှစ်သမီးတာပြောတယ် ရေးနိုင်လိုက်တာများလွန်လို့။
အမြဲတမ်းဘလော့ဂ်အတွက် စဉ်းစားနေတဲ့ ရောဂါရနေတာလဲ ကြာပါပြီဗျာ။
အချိန်ဆင်းရဲသူလဲ ဖြစ်ပြန်သမို့ စာအုပ်တွေလဲ မဖတ်နိုင် ။ ဖတ်ချင်တဲ့ ဘလော့ဂ် စာရင်းတောင် အသစ်တက်သမျှ ကုန်အောင် မဖတ်နိုင်လို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိ။ ကိုယ်တိုင်ပို့စ်တင်ဖို့ ကျတော့လဲ အချိန်ရှား။ ဖြစ်သလို ဆားချက်ပြန်တော့လဲ သဘောမကျ ။
ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အစ်မရေ ဆက်သာဂင်း မရအရ လာဖတ်မယ်။
မြစ်ကျိုးအင်း Sun Nov 07, 02:58:00 AM GMT+8
နောင်နှစ်တွေတိုင်အောင် စာတွေ ဆက်ရေးနိင်ပါစေဗျာ။
ရင့်ကျက်လာတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကပဲ စာကောင်းလေးတွေ ထပ်ထွက်လာစေမှာပါ။ အစ်မရဲ့ ဘလော့ဂ်လေး အချိန်အကြာကြီး ရှင်သန်နေစေချင်ပါတယ်။
ဝေလင်း Sun Nov 07, 03:07:00 AM GMT+8
အစ်မblog လေးတောင် တစ်နှစ်ပြည့်သွားပြီနော်။ အစ်မပြောသလိုပါပဲ ဘာမှမကြာလိုက်သလိုပဲ...။ ပို့စ်ပေါင်း၁၆၀ တောင်တင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်၊ ချီးလည်းချီးကျူးတယ်။ လေးလည်းလေးစားတယ်။ အောင်အောင်မြင်မြင် တစ်နှစ်ပြည့်ခဲ့တဲ့ အစ်မ ဘလော့ဂ်လေးကို ကြည့်ပြီး ပီတိလည်း ဖြစ်မိတယ်..။ ပျော်ရွှင်ပါစေအစ်မရေ...
khin oo may Sun Nov 07, 03:24:00 AM GMT+8
ဝက်ဝံလေး Sun Nov 07, 07:32:00 AM GMT+8
ပို့စ် ၁၆၀ အိုက်ရှားဘားးးး များတောင် ၁၂၀ ပဲရှိတယ် မချစ်
လေးစားတယ်ဗျာ (ရာဇာနေဝင်း စတိုင်လ်ဖြင့်)
မေငြိမ်း Sun Nov 07, 08:58:00 AM GMT+8
Happy Birthday Blog လေးးး
rose of sharon Sun Nov 07, 09:23:00 AM GMT+8
ကိုချစ်ဖေ Sun Nov 07, 09:39:00 AM GMT+8
ရေးသာရေးမချစ်ကြည်အေး မတူတာတွေရှိကိုရှိနေတာကိုက သဘာဝပိုဆန်တယ်ဗျာ မတူညီမှုများနဲ့ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခြင်း လို့တောင်ပြောလို့ရပြီပေါ့ဗျာ..ဘလော့သက်လေးတနှစ်မှသည် ဘလော့ဖွားဖွားကြီးအထိ သက်တော်ရာကျော်ရှည်ပါစေဗျားးးးးးးးးးးးးး
Moe Cho Thinn Sun Nov 07, 12:28:00 PM GMT+8
တနှစ်တာမှာ ပျော်ရွှင်ခဲ့ရသလို နောင် နှစ်ပေါင်းများစွာ ပျော်ရွှင်စွာ blogging လုပ်နိုင်ပါစေ လို့ ဆုတောင်းပါတယ် အမရေ..
(မီးမလာမှဘဲ ဘလော့ဂ်ရေးတာ ရပ်မယ်ဆိုတော့ မြန်မာပြည် ပြန်ရင် မရေးဘူး လို့ ဆိုလေသလား ကိုယ့်အမ) :)
Crystal Sun Nov 07, 01:06:00 PM GMT+8
ရင်ကို...ဖွင့်ချခဲ့စမ်းပါ ဆိုတာကို အကြိုက်ဆုံး :)
SHWE ZIN U Sun Nov 07, 01:23:00 PM GMT+8
တနှစ်ပြည့် လေး ကနေနှစ်ပေါင်း များ စွာ ချီတက်ကြရအောင်နော် ချစ်ကြည်အေး ရေးခဲ့ တဲ့ စာလေး တွေ မျှဝေခံစားမှု့လေး တွေ အတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်နော်
ချစ်ကြည်အေး Sun Nov 07, 01:40:00 PM GMT+8
ကိုအောင်၊ ညီမဂျင်ဂျင်း၊ ကိုZ၊ ကိုပေါ၊ ညီမမယ်စင်၊ ညီမသဒ္ဒါ၊ ကလူသစ်၊ ညီမ နတ်သမီး၊ ညီမလေး ဝက်ဝက်၊ မောင်ရီနိူ၊ အကိုအေတီအန်၊ မငယ်၊ မောင်လေး၊ ညီမကေ၊ ကိုကြီးကျောက်၊ ညီမဆီစိမ်၊ သူငယ်ချင်းသီတာ၊ ညီမမယ်ကိုး၊ သူငယ်ချင်း ဆွိ၊ မောင်လေး အုပ်ကြီး၊ ညီမ အနမ်း၊ အမည်မသိ၊ အင်္ဂါဟူး၊ မောင်မြစ်၊ မောင်လေးဝေလင်း၊ မမကွန်၊ အမ မေငြိမ်း၊ သူငယ်ချင်း ရိုစ့်၊ အကိုချစ်ဖေ၊ ညီမချိုသင်း၊ ညီမ ခရစ်စတယ်၊ မမရွှေစင်....
အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ခုပဲ ခရီးက ပြန်ရောက်ရောက်ချင်း ဘလော့ဂ်လေး ဖွင့်အကြည့်မှာ တော်တော် အမောပြေသွားရတယ်။ ချစ်သော စာဖတ်သူများ၊ ရေးဖော်များ၊ သူငယ်ချင်းများ အားလုံး ခွန်အားပေးတဲ့ ကော်မန့်လေးတွေအတွက် ရင်အေးရပါတယ်။ အတူတကွ စာတွေရေးရင်း လာမဲ့နှစ်တွေကို ပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းကြရအောင်...:)
ယွန်း Sun Nov 07, 03:29:00 PM GMT+8
မီးမပျက်မချင်း ရေးနိုင်ပါစေ အစ်မချစ်... :)
MrDBA Sun Nov 07, 05:43:00 PM GMT+8
အများကြီး ဆက်ရေးနိုင်ပါစေဗျား။း)
လသာည Sun Nov 07, 06:02:00 PM GMT+8
တစ်နှစ်အတွင်းမှာ ပိုစ်တွေအများကြီး ရေးထားတာနော်။ တစ်နှစ်မကတော့ဘူးမှတ်နေတာ။
မမချစ်ဘလော့ကို မတော်တဆ ရောက်လာခဲ့ပြီးနောက် မမရဲ့စာတွေကို သဘောကျလို့ အမြဲလာအားပေးနေခဲ့ပါတယ်။ ရေးပုံဆန်းဆန်းလေးနဲ့ အတွေးလှလှလေးတွေကို သဘောကျနှစ်ခြိုက်တာရော၊ ဖွင့်ချခဲ့စမ်းပါဆိုတဲ့ စကားလုံးလေးကိုပါ သဘောကျလို့ပါး))
လေးဂွနဲ့ထုခံရတာကိုလည်း မြင်မိပါတယ်။ အဲဒီအချိန်လည်း မမချစ်ရဲ့ သဘောထားပြည့်မှုကို လေးစားမိရပါတယ်။ မမချစ်ရဲ့စာတွေဖတ်ပြီး ပြုံးပြန်လိုက်၊ လွမ်းပြီးပြန်လိုက်နဲ့ အရှိန်လွန်ပြီး တခါတခါ ကွန်မန့်တောင် မချန်ဖြစ်ဘူး။
မမချစ်.. ဘလော့တစ်နှစ်မှသည် မီးလာသ၍ ဆက်လက်တည်တံ့ပါစေ..။ မမချစ် ကျန်းမာချမ်းသာပါစေလို့...
Anonymous Sun Nov 07, 06:40:00 PM GMT+8
စိတ်မပျက်သွားနဲ့ ကျွန်တော်တောင် ရွာမှာချဉ်ပေါင်စိုက်ရင်းဘလော့ဂင်းနေတာ ကြည့်း)
မောင်မိုး Sun Nov 07, 07:29:00 PM GMT+8
တနှစ်တောင်ရှိသွားပြီလား...ကျနော်ဖြင့် မနေ့တနေ့ကလိုပဲ အောက်မေ့နေတယ်။ ဘလော့အသက် မတိမ်းမယိမ်းတွေမို့ ဖွားဖက်တော်တွေအချင်းချင်း အားပေးလျက်ပါ။
TZA Sun Nov 07, 08:27:00 PM GMT+8
အင်းပေါ့လေ.. သူများတွေက ၁ နှစ်တောင်ပြည့်သွားတော့ ပြောအားရှိတာပေါ့၊ ဒို့က ခုမှအသစ်ချက်ချွတ်လေးရှိသေးတာ..
Thant Sun Nov 07, 08:56:00 PM GMT+8
၁နှစ်တောင်ပြည့်သွားပြီလား.....မြန်လိုက်တာနော်..... ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နဲ့စာတွေ အများးးကြီးဆက်ရေးနိုင်ပါစေ.....း)))
သက်ဝေ Sun Nov 07, 09:35:00 PM GMT+8
တနှစ်မပြည့်ခင်ထဲက ကောင်းကောင်း လမ်းလျှောက်တတ်နေတဲ့ သမီးလေးပါ... ဒီလိုနဲ့ တနှစ်ပြီး တနှစ်... နှစ်ပေါင်းများစွာ ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ စာတွေအများကြီး ဆက်ရေးနိုင်ပါစေ...
Anonymous Sun Nov 07, 09:38:00 PM GMT+8
ဘလော့ခ်တစ်နှစ်ပြည့်မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ တိုင်စေသော်ဝ်
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) Sun Nov 07, 10:03:00 PM GMT+8
တစ်နှစ်ပြည့်မှသည် အစ်မရဲ့ စိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့ အချိန်အတိုင်းအတာအထိ စာတွေရေးနိုင်ပါစေ။
ရယ်မောရွှင်ပျစရာလေးတွေ အသောအထေ့လေးတွေက အစ်မရဲ့ ဘလောဂ့်လေးကို အသက်ဝင်စေခဲ့သလို
ခရီးသွားဆောင်းပါးလေးတွေ၊ အတွေ့အကြုံ မျှဝေမှုတွေကလည်း အစ်မဘလောဂ့်ရဲ့ ဆွဲဆောင်မှုတစ်ရပ်လည်း ဖြစ်သလို
ဟောဟောဒိုင်းဒိုင်း အရေးအသားတွေကလည်း စာဖတ်သူတွေကို ရွှင်မြူးစေခဲ့ပါတယ်..
ဆက်လက်ပြီး အစ်မရဲ့ စာလေးတွေကို နောင် နှစ်များစွာ များစွာတိုင် ဖတ်ချင်ပါသေးတယ်
ဖတ်ခွင့်ရမယ်လို့လည်း မျှော်လင့်နေပါတယ်.. ချစ်သော အစ်မချစ်ရေ............
nu-san Sun Nov 07, 11:23:00 PM GMT+8
အမရေ.. ရှေ့ဆက်ပြီးလည်း ပျော်ပျော်ကြီး blog ရေးနိုင်ပါစေနော်.. :))
ညီမလေး Mon Nov 08, 08:42:00 PM GMT+8
ဘလော့ရေးတာ မရပ်အောင် မီးစက် ဝယ်ပေးမယ်နော် .. ပျော်ပျော်ကြီး ဆက်ရေးပါ ချစ်ချစ်ရဲ့ စာတွေ အများကြီးးးးး ဖတ်ချင်ပါသေးတယ် .............
pandora Wed Nov 10, 10:46:00 PM GMT+8
စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်စွာ စာတွေ အကြာကြီး ဆက်ရေးနိုင်ပါစေ။
ဇွန်မိုးစက် Wed Nov 17, 12:40:00 AM GMT+8
အမဘလော့နှစ်ပတ်လည်က ဇွန်ရိပ်သာစ၀င်တဲ့ရက်နဲ့တိုက်နေလို့ ဆုမတောင်းပေးလိုက်ရဘူး။
ချစ်တဲ့အမ စိတ်ကြည်သာရွှင်လန်းစွာဖြင့် စာရေးချင်စိတ်ရှိနေသမျှ ကာလပတ်လုံး စာတွေဆက်ရေး ဘလော့ဂင်းနိုင်ပါစေ။း)